Linda, ane makore 71 anoti: “Pandakaudzwa kuti ndaiva nekenza mumapapu uye mumatumbu, ndakabva ndaona rufu mberi kwangu. Asi pandakasvika kumba ndichibva kwachiremba, ndakati, ‘Izvi handizvo zvandaitarisira, asi ndinofanira kuona zvekuita kuti nditsungirire.’”
Elise, ane makore 49 anoti: “Ndine chirwere chinorwadza chinoita kuti tsinga dzekuruboshwe kwechiso changu dzitadze kushanda zvakanaka. Dzimwe nguva marwadzo acho anoita kuti ndishungurudzike zvakanyanya. Kakawanda ndainzwa kusurukirwa, uye ndakatombofunga kuzviuraya.”
PAUNOZIVA kuti iwewe kana hama yako yabatwa nechirwere chinouraya, zvinogona kuita kuti ushungurudzike zvakanyanya. Panenge pachiti marwadzo echirwere chacho, kwozotiwo kushushikana mupfungwa uye zvimwe zvinhu zvinoshungurudza zvinenge zvichiitwa nevari kukuchengeta. Zvimwe zvinoita kuti uwedzere kutya uye kushushikana inyaya yekuendazve kwachiremba, kunetseka kuwana mari yekurapwa kana kuti mishonga uye matambudziko anokonzerwa nemishonga yaunenge uchishandisa. Zvese izvi zvinogona kuita kuti uone sekuti hauchazvigoni.
Saka tingawanepi rubatsiro? Vakawanda vakanyaradzwa nekunyengetera uye kuverenga mavhesi anonyaradza ari muBhaibheri. Rudo uye rutsigiro rwatinowana kuhama neshamwari zvinogona kutibatsirawo.
Robert ane makore 58 anoti, “Paunosangana nedambudziko reurwere, iva nekutenda muna Mwari uye achakubatsira kuti utsungirire. Nyengetera kuna Jehovha uchimuudza zviri kukunetsa. Mukumbire kuti akupe mweya mutsvene, akubatsire kuti urambe wakadzikama uye kuti usaita zvinhu zvinopedza simba vari kukuchengeta.”
Robert anoenderera mberi achiti, “Kana hama dzako dzikamira newe dzichikutsigira, izvozvo zvinobatsira chaizvo. Mazuva ese panotoita munhu mumwe chete kana vaviri vanondifonera vachibvunza kuti ndiri sei. Ndine shamwari dzinondikurudzirawo. Dzinondibatsira kuti ndinzwe zviri nani uye kuti nditsungirire.”
Paunoshanyira shamwari inenge ichirwara, inzwa zvakataurwa naLinda zvinogona kukubatsira. Akati: “Munhu anenge achirwara anodawo kungorarama sezvinoitawo vamwe uye anogona kunge asingadi kungogara achitaura nezvekurwara kwake. Saka taurawo naye dzimwe nyaya.”
Tichibatsirwa naMwari uye nekunyaradzwa kwatinoitwa neBhaibheri, nerutsigiro rwatinowana kubva kuhama neshamwari, tinogona kurarama tichifara kunyange kana tichirwara zvakanyanya.
“Ndakabvunza Jehovha, iye akandipindura, akandinunura pazvinhu zvose zvaindityisa. . . . Anotambudzika akashevedza, Jehovha akazvinzwa.”​—Pisarema 34:4, 6.
Linda ambotaurwa anoti: “Handinyengeteri ndichiti, ‘Itai kuti ndipore.’ Asi ndinoti, ‘Ndibatsirei ndishinge uye nditsungirire.’”
Verenga Shoko raMwari kuti uwane simba.
“Hakuna mugari wemo achati: ‘Ndiri kurwara.’”​—Isaya 33:24.
Funga nezvezvinhu zvatinovimbiswa naMwari, uye izvozvo zvichaita kuti uve netariro.
Kumbira kubatsirwa nehama neshamwari.
“Shamwari yechokwadi ine rudo nguva dzose, uye ihama inoberekerwa kubatsira pakunenge kuine kutambudzika.”​—Zvirevo 17:17.
Elise ambotaurwa anoti, “Usazviparadzanisa nevamwe. Bvuma kubatsirwa neshamwari dzako. Dzimwe nguva unogona kusurukirwa, kana kutofunga kuti Mwari haasi kukunzwa, asi usazviparadzanisa nevamwe.”
Pane Chekuraramira Here Kana Uchirwara Zvakanyanya?